November 2020 – Page2– မြန်မာသတင်းစုံ
အသားညိုညို မျက်နှာကသိပ်အလှကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အသက် ဆယ့်ခြောက် နှစ်လို့မထင်ရလောက်အောင် သာမာန်ထက်ထွားကြိုင်းတဲ့ မိန်းမပျိုလေး အထူးသဖြင့်ကတော့ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ပေါင်သား အထက်ကအိစက်တင်းပြည့်ကာ ကောက်တက်နေတဲ့ တင်သားအလှက အထူးခြားဆုံးဆိုရမယ် ရင်သားကတော့သာမာန်လောက်ပါပဲ… လေးတန်းအထိပဲပညာသင်ခဲ့ရပြီး စက်ဘီးတစီးနဲ့ ရွာစဉ်လှည့်ကာ အသားငါးအသီးအရွက်အစုံရောင်း ချပြီး အဖေမရှိတော့တဲ့အမေမုဆိုးမနဲ့မောင်လေး တယောက်တို့ကိုလုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးနေသူပါ သူမကိုတဖက်သတ်ချစ်နေပြီးခဏဏရီးစားစကား လိုက်ပြောနေတဲ့ ဇီးကျွန်းကအောင်ခိုင်ကို။ သူမသဘော မကျမနှစ်သက်လို့အတန်တန်ငြင်းပယ်ခဲ့တယ် ဒါကိုသိသိနဲ့အောင်ခိုင်က မရမကကိုသူမပြန်တိုင်း နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေပြန်လေသည် တရက်မှာတော့။ ” ယုယု ငါ့အချစ်ကိုလက်ခံပါဟာ ငါနင့်ကို အတည်ယူပေါင်းသင်းမှာပါ” အောင်ခိုင်ကစက်ဘီးရှေ့ကနေပိတ်ရပ်ထားပြီး ဇွတ်တရွတ်အဖြေတောင်းနေသည် နေရာကလည်းသူတို့ဇီးကျွန်းရွာအစပ်နားက လျှိုလမ်းအဆင်းထဲမှာဖြစ်သည် ယုယု အခက်တွေ့ နေရသည် စကားအပြတ်ပြောလိုက်မှအေးမည် ” ဒီမှာကိုအောင်ခိုင် ကျမရှင့်ကိုပြန်မချစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲဟင် ကျမအဲ့ဒါတွေစိတ်လည်း မဝင်စားဘူး ရှင့်လိုလူကိုလည်းအထင်ကိုမကြီးတာ ဆယ်တန်းတဖုန်းဖုန်းကျ မိဘတွေကမရှိရှိတဲ့ကြားက ထားပေးတာတောင် စောက်ဖြစ်မရှိတဲ့လူ ရှင့်မိဘတွေကရော […]
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author admin	Comments Off on အစ်မကိုမညှာနဲ့
နောက်မှကြမ်းချင်ကြမ်းပေါ့ (အပြာစာအုပ်) =======================-========= ပြွတ်…စွပ်….စွပ်…. အ….အား…. သိပ်နာနေလား…. အင်း….ဟင်း… မနေ့ညကမှစပြီးခံဖူးသည့် စောက်ပတ်က အခုဒုတိယညရောက်လာပေမယ့် လိုးပြီးရင်း လိုးရင်းလုပ်နေတာကြောင့် နာကျင်ကျိန်းစပ်နေသည်။ ဒါဆို မနက်မှဆက်လုပ်မယ်လေ…. ဟင့်အင်း….ဝင်နေပြီပဲကွာ….ဖြေးဖြေးလုပ်….နောက်မှကြမ်းချင်ကြမ်းပေါ့…. အားအင်ချိနဲ့သော သွယ်သွယ်၏ လေသံလေးက အိမ်ထောင်ဦး ဒုတိယည၏ ဂီတသံစဉ်လေး ဖြစ်နေသည်။ အထဲ ကို တစ်ချောင်းလုံးဝင်နေပြီ။ အရည်ကြည်တွေက ရွှဲကနဲ ရွှဲကနဲ ထွက်လာနေသည်။ စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး၏ အပြင်ဖက် ရော အတွင်းဖက်မှာပါရှိသည့် ကြွက်သားတွေ အသားစိုင်တွေက တဖြေးဖြေး မာကျစ်ကာ ဖောင်းထလာကြပြီ။ ဒီအခြေအနေ တွင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရပ်လိုက်လို့ဖြစ်မလဲ။ သွယ်သွယ်မှာ ဒီအချိန်တွင် အလိုးရပ်လိုက်မည့်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါ။ သွယ် သိပ်နာနေမှာစိုးလို့ပါ…. လုပ်မှာလုပ်ကွာ စကားပြောမနေနဲ့…. စောက်ခေါင်းထဲတွင် ငြိမ်၍စိမ်ထားသော လီးချောင်းပူပူမာမာကြီးကို အမြန်ဆုံးပြန်၍ […]
Posted on November 20, 2020 Author admin	Comments Off on နောက်မှကြမ်းချင်ကြမ်းပေါ့